Umlando weBlockchain - Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Umlando weBlockchain
Tag: Izihlahla ze-Merkle, Blockchain, Ama-Dapps, Umshini we-Ethereum Virtual Machine (EVM), IHal Finney, I-Hashcash, Ubufakazi bomsebenzi, Ubufakazi Obusebenza Kabusha Bomsebenzi, I-RPoW, Satoshi Nakamoto, UScott Stornetta, Izinkontileka ezi-Smart, UStuart Haber, I-Vitalik Buterin, Wakefield Scott Moller Stornetta
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu
Ubuchwepheshe obusekela umhlaba we-cryptocurrency budume umhlaba wonke blockchain.
I-blockchain ivumela umsebenzisi ngamunye kunethiwekhi ukufinyelela esivumelwaneni ngaphandle kokudinga ukuthi bathembane. Kubukeka kulungile ukutshela ukuthi uyini umlando we-blockchain, ngamafuphi.
Ubufakazi Bomsebenzi buyavuseleleka
Umqondo ngemuva kobuchwepheshe be-blockchain wachazwa kudala nge-1991, lapho abacwaningi UStuart Haber noW. Scott Stornetta bethule isixazululo esisebenza ngekhompuyutha sokumaka amadokhumenti edijithali ukuze angabuyiselwa emuva noma aphazanyiswe.
UStuart Haber noW. Scott Stornetta
Uhlelo olusetshenzisiwe uchungechunge oluvikelekile lwe-cryptographic ukugcina amadokhumende amakwe nge isitembu sesikhathi futhi vele ngonyaka we-1992 iphrojekthi ibuyekezwe ngezihlahla zeMerkle, yenziwa ukuthi isebenze kahle futhi ikuvumele ukuthi uqoqe imibhalo eminingi endaweni eyodwa. Yize lokhu kwalaba bacwaningi kwakungumzamo omkhulu, lobu buchwepheshe buhlala bungasetshenziswa futhi ilungelo lobunikazi laphela ngo-2004, eminyakeni emine ngaphambi kokuzalwa kweBitcoin.
Ngo-2004, usosayensi wamakhompyutha nesishoshovu se-crypto uHal Finney (Harold Thomas Finney II) wethula uhlelo olubizwa nge-RPoW, Reusable Proof Of Work. Uhlelo lusebenze ngokuthola ithokheni engashintsheki noma “ubufakazi bomsebenzi” obususelwe kuHashcash futhi ngokubuyisa lakha ithokheni elisayiniwe laseNingizimu Afrika elingadluliselwa lisuke kumuntu liye komunye.
I-RPoW ixazulule inkinga yokuchitha kabili ngokugcina ubunikazi bamathokheni abhalisiwe kuseva ethembekile, eyenzelwe ukuvumela abasebenzisi emhlabeni jikelele ukuthi baqinisekise ukulunga nobuqotho bayo ngesikhathi sangempela.
Singabheka i-RPoW njengesibonelo sokuqala nesinyathelo sokuqala esibalulekile emlandweni wama-cryptocurrensets.
Ekupheleni kuka-2008, kwakhishwa eyodwa i-whitepaper, iphepha lokucwaninga, elethula uhlelo lontanga olwenzelwe amandla endlela - olubizwa ngeBitcoin. Ithunyelwe kuhlu lokubhala ngemfihlo lokubethela ngumuntu noma iqembu kusetshenziswa igama le-alias Satoshi Nakamoto.
Le phrojekthi ibisuselwa kubufakazi bomsebenzi we-Hashcash algorithm, kepha kunokuba isebenzise amandla wekhompiyutha we-computational njenge-RPoW, i-Bitcoin double protection protection yanikezwa ngeprotocol yontanga-to-peer esetshenziselwe ukulandela ngomkhondo nokuqinisekisa ukuthengiselana. Ngamazwi alula, Ama-Bitcoins "ambiwa" ukuze athole umvuzo kusetshenziswa indlela yokuqinisekisa umsebenzi ngabavukuzi ngamunye bese kuqinisekiswe yizindawo inethiwekhi esezingeni eliphansi.
U-Bitcoin wazalwa ngoJanuwari 3, 2009.
Ibhlokhi yokuqala yeBitcoin yambiwa uSatoshi Nakamoto, ngomvuzo wama-50 Bitcoins. Umamukeli wokuqala we-Bitcoin kwakunguHal Finney, owathola ama-Bitcoins ayi-10 avela kuSatoshi Nakamoto ekuthengisweni kokuqala kweBitcoin ngoJanuwari 12, 2009.
Ku-2013, I-Vitalik Buterin, umdidiyeli wohlelo nomsunguli womagazini i-Bitcoin, wathi iBitcoin yayisidinga kakhulu i ulimi lokubhala (ukufaka ikhodi, ukwakha ikhodi) ukwakha izicelo ezinikezwe amandla. Yehluleka ukuthola ukuvumelana komphakathi, uVitalik waqala ukwakhiwa kwepulatifomu entsha yokusabalalisa esekwe nge-blockchain, wayiqamba ngokuthi i-Ethereum. Njengoba ethembisile, le nethiwekhi entsha yayinesici sokubhala ngaphakathi kwayo esibizwa Izinkontileka ezi-Smart.
Izinkontileka Ezihlakaniphile yizinhlelo noma imibhalo esatshalaliswa futhi yenziwe ku-Ethereum blockchain, futhi ingasetshenziswa ukwenza ukuthengiselana uma kuhlangatshezwana nemibandela ethile. Izinkontileka ezihlakaniphile zibhalwe ngezilimi ezithile zohlelo futhi zihlanganiswe nge-bytecode, lapho umshini we-Turing-ephelele (noma we-Turing-elinganayo) owabelwe phansi obizwa nge-Ethereum Virtual Machine (EVM) ungafunda futhi wenze.
Onjiniyela, inhliziyo eshayayo yale blockchain, bayakwazi ukudala nokushicilela izinhlelo zokusebenza ezisebenza ngaphakathi kwe-Ethereum blockchain. Lezi zicelo zivame ukubizwa DApps (Izicelo ezisetshenzisiwe) futhi zingaba namafomu ahluke kakhulu komunye nomunye, njengezinhlelo zokusebenza efonini yethu: izinhlelo zokusebenza zokuxhumana nabantu, izinhlelo zokugembula kanye nezinhlelo zokusebenza zokushintshaniswa kwezezimali.
Imali ye-Ethereum ibizwa nge-Ether (ETH). Ingadluliselwa phakathi kwama-akhawunti futhi isetshenziselwa ukukhokhela amakhomishini wamandla wekhompyutha asetshenziswayo lapho kwenziwa izinkontileka ezihlakaniphile.
Ubuchwepheshe beBlockchain buya ngokuya bube ukunakwa, buheha ukunakwa okuningi kokujwayelekile, futhi sekuvele kusetshenziswa ezinhlobonhlobo zezicelo, kungagcini kuma-cryptocurrensets.
Isihloko esilandelayoKusho ukuthini ukufaka izimayini ze-cryptocurrensets nokuthi inqubo yezimayini isebenza kanjani
Kusho ukuthini ukufaka izimayini ze-cryptocurrensets nokuthi inqubo yezimayini isebenza kanjani
Kuyini ukuqhuma emhlabeni we-Cryptocurrencies?
I-Sorare: yimiphi imiqhudelwano ekhona ehlobo? Kubuyekezwe ngo-2022